Ajụjụ: Olee otú e si ede Ekpere Onyenwe Anyị n'asụsụ Bekee?
Kedu ka esi asụpe Ekpere Nna Anyị na Bekee?
Kedu otu esi ede Nna anyị zuru oke?
Kedu ka ị si ekwu ka ị gafee onwe gị na Bekee?
Kedu otu ị ga-esi kwuo ahịrịokwu na bekee?
Gịnị ka Ekpere Onyenwe Anyị na -akụziri anyị?
Gịnị ka Ekpere Onyenwe Anyị pụtara?
Gịnị ka Nna anyị nke eluigwe pụtara, ka e doo aha gị nsọ?
Olee otú ị na-ekpe ekpere ka Chineke zọpụta gị Mary?
Kedu ka ị ga -esi kpee ekpere?
Nso idi nnennen usụn̄ ndibọn̄ akam nte Bible ọdọhọde?
Kedu ka ị si ekwu Persinar?
Kedu ka esi ede akara obe n'obe bekee?
"Nna anyị Onye bi n'elu -igwe, ka edo aha -Gi nsọ.
N'agbanyeghị nke ahụ se na -edepụta mkpoputa okwu abụọ nna anyi (p. nna anyi):"Te Ana m agbaghara site na penance de iri nna anyi»(Gallegos gara aga [C. Rica 1993]); ma taa es Ọtụtụ na mma mkpoputa dị mfe, onye otutu es Nna Anyị: “Ekpere m Nna anyị iri ekpere kwa abalị” (Mundo [Esp.]
gafere onwe ha bụ okwu ọzọ maka obe. … Gafee onwe gị vtr + refl. mee akara nke obe nsọ v expr. Ụkọchukwu se o gafere tupu enye uka.
ahịrịokwu s (ọtụtụ: ahịrịokwu)
Ọ bụ ekpere Na na gbanyere mkpọrọgwụ na òtù ụmụnna zuru ụwa ọnụ na nos na -aza onye ọ bụla ajụjụ. Akụkụ mbụ nke nna anyi Ọ bụ ekpere nke otuto nye Chineke n'onwe ya site na arịrịọ atọ: ido aha ya nsọ, ọbịbịa nke alaeze na mmezu nke uche ya.
Ọ BỤ mmasị: Ị jụrụ: Gịnị bụ akwa Ista n'egwuregwu vidiyo?
El Nna anyi na -eme ka anyị jụọ ihe que dị mkpa
Emela ka ọ pụta ìhè que na Nna anyị Anyị na -arịọ naanị maka ihe dị mkpa “dị ka 'achịcha ụbọchị niile', n'ihi na dịka Jizọs na -akụziri anyị, ekpere abụghị ihe dị iche na ndụ, kama que malite na mkpu mbụ nke anyị ịdị adị nke mmadụ ”.
Ntụnye dị oke egwu nke okwu ahụ dị nsọ (mgbe niile dịka ụzọ echiche na ikwu okwu nke Akwụkwọ Nsọ si kwuo) na -ezo aka na Chineke maka njirimara ya dị nsọ. N'ihi ya, jụọ na «gị doo aha nsọ»Na -egosipụta ọchịchọ anụ ahụ maka Chineke igosipụta onwe ya na Oké osimiri ndị mmadụ matara dị ka ezi Chineke.
Chukwu zoputa gi MariaỊ jupụtara n'amara, Onyenwe anyị nọnyeere gị. Ngọzi dịrị gị n'etiti ụmụ nwanyị niile, ngọzi na -adịrị mkpụrụ nke afọ gị Jizọs. Santa María, Nne nke DiosKpee ekpere maka anyị ndị mmehie ugbu a na n'oge ọnwụ anyị. Amen.
Mgbe se jidesie obe se na -eme akara nke obe wee se kwughachi Iwu nke Nri.
Na akaụntụ mbụ se na -agụ Nna Anyị.
Na nke ọ bụla n'ime obere akụkọ atọ ndị a se na -agụ Mary Hail.
Se na -agụ otuto tupu nnukwu bead ọzọ.
Kpee ekpere n'ehihie
Oge a na-emebu maka kpee ekpere Ha nọ n'ụtụtụ, na mmalite ụbọchị, n'ehihie, tupu nri ọ bụla na n'abalị, tupu ha alakpuo ụra. Agbanyeghị, enweghị oge adịghị mma maka kpee ekpere. Dios na -ege ntị mgbe niile, yabụ anyị nwere ike "kpee ekpere n'akwụsịghị akwụsị ”(1 Ndị Tesalonaịka 5:17).
Ọ BỤ mmasị: Gịnị ka Jizọs gwara Nna ya na Getsemeni?
Ọ sitere na persignare Latin, yabụ na ụdị onye isi adịghị mma (se), n'ihi ngafe na prefix pre-. E kwesịrị izere ịkpọpụta okwu na -adịghị mma [persinár (se)].
Site na mgbaàmà nke Nsọ CruzJehova, bú Chineke-ayi, naputa ayi n'aka ndi-iro-ayi. N’aha nke Nna, na nke Ọkpara, na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Nna anyị, nke nọ n'eluigwe, ka e doo aha gị nsọ; ka alaeze gị bịa; Ka eme uche-Gi n'elu uwa dị ka n’eluigwe.
Azịza kacha mma: Gịnị ka ubi -vine na -anọchite anya ya n'ime Akwụkwọ Nsọ?
Kedu ka esi akpọ aha Chineke?
Ajụjụ gị: kedu ka akpọrọ onyeisi ndị mmụọ ozi Saint Michael?
Ajụjụ: Ole ndị bụ ndị nwetara Oziọma Luk?
Ajụjụ gị: Gịnị ka aha Joel onye amụma pụtara?
Nye bụ nwunye Isọ n'ime Bible?
Gịnị bụ mmekọrịta dị na Mmụọ Nsọ na ndị nsọ?